Forum serasera malagasy Ny tena tantaran'ny dinôzôra, fizaràna voalohany - Dinika forum.serasera.org
Ny tena tantaran'ny dinôzôra, fizaràna voalohany
Fitohizan'ny hafatra : Ny tena tantaran'ny dinôzôra, fizaràna voalohany
Nehemiah - 22/07/2013 08:26
Ny fanontaniana voalohany tsy maintsy apetrakantsika dia ity : inona no atao hoe dinôzôra ? Ity voambolana ity dia noforonin'i Richard Owen t@ 1842, rehefa namorona taxon (sokajin-javamananaina) vaovao hanasokajiana karazana reptiles vaovao, avy @ Grika deinos (mampatahotra, na goaibe), sy sauros (androngo). "Androngo goaibe" izany ny dinôzôra. Kanefa, araky ny nolazaiko tetsy ambony, sokajin-javamananaina misongadina ny dinôzôra. Kanefa ny olana dia tsy misy inona na inona tena ahafahantsika mandinika azy ireo @ fomba mitombina afa-tsy taolana, ka ahoana no anavahana azy ireo @ androngo tena androngo ? Fomba 1 ihany no ahafahantsika manao an'izay dia ny fipetraky ny tanany sy tongony :
Ny mampisongadina ny dinôzôra @ reptiles hafa izany dia ny fipetraky ny tanany sy tongony izay mitovy @ an'ny biby mampinono.
Iza no dinôzôra ngeza indrindra fantatra ankehitriny ? Io ilay izy, dia ny Argentinosaure :
Dia efa maivana kely @ ny elefanta ! 50 m ny halavany manomboka @ lohany ka hatr@ tendron'ny rambony, ary angamba 100 t mahery ny lanjany ! Na dia ny taolan-kazon-damosiny 1 aza dia efa 1,20 m !
Tany Amerika Atsimo koa no nahitàna ny dinôzôra mpihinan-kena ngeza indrindra fantatra ankehitriny dia ny Giganotosaure :
Tahaky ny T-Rex fa saingy nihinana stéroïdes. Aleo ihany tsy mifanena @ .
Kanefa nisy koa anie ny dinôzôra kely be. Ohatra 1 ny Mussaure. Somary mahagaga ihany fa teny Latinina (Mus, totozy) sy Grika no nafangaro teo.
Hitantsika eto fa mitovitovy @ an'ny alika be ny habeny. Fa ny kely indrindra fantatra ankehitriny dia ny Micropachycéphalosaure :
Kanefa fantaro fa tsy ny androngo goaibe rehetra no dinôzôra. Satria mantsy tsy mahay manao an'izay fanavahana izay ny haino aman-jery. Na dia CNN aza, t@'izy namoaka lahatsoratra momba ny nahitàna kankana anatin'ny kôprôlita (dikin-dinôzôra voafôsily), dia nanao hoe
Citation They may have ruled the land and the sea 75 million years ago...
Ka tsy nisy dinôzôra anie ny ranomasine e.. Tety ambony tanety ihany no niveloman'ny dinôzôra.
Ity no atao hoe plésiosaure :
Jereo tsara ny tanany sy tongony : tsy mitsangana fa mitsivilana. Ireny no atao hoe "reptiles marins" mb@ ichtyosaures sy mosasaures.
Torak'izay koa ny ptérosaure :
Ilay hitantsika @'ity sary ity dia ny Quetzalcoatlus, ilay ptérosaure ngeza indrindra fantatra ankehitriny.
Mazava ho azy fa "reptiles volants", na androngo manan'elatra, izy ireo fa tsy dinôzôra.
T@ taon-jato faha-XIX, nisy karazana "adin-taolana" t@ Edward Drinker Cope sy Othniel Charles Marsh, izay samy paleontôloga nanana ny maha-izy azy, izany hoe izay mahita sisan-dinôzôra be dia be indrindra no mandresy. I Marsh no nandresy t@ farany.
Kanefa izao no mahaliana : t@ 1877, nahita sisan-dinôzôra tsy misy karan-doha izay nomeny anarana hoe Apatosaurus izy.
T@ 1879, nahita sisan-dinôzôra goaibe hafa ny ekipan'i Marsh, ary nantsoina hoe Brontosaurus (androngom-baratra) ilay izy. Namboarina tany Yale ilay haràka, ary karana hita teo akaikiny (izany hoe tsy nipetaka t@) no natao ho lohany.
Kanjo, hitan'i McIntosh sy Bergman t@ faramparan'ny taona 1950 fa lohan-dinôzôra hafa karazana (Camarasaure) no natao ho lohan'ny Apatosaure. Kanefa 25 taona taoriana no navoaka ilay vaovao ary t@ 1989 voa mba novaina ny bokim-pianarana.
Toy izao no nolazain'ny pancarte 1 tany @ Dinosaur National Park any Utah :
Nahoana no 100 taona voa mba nahafantarana fa diso loha ny Apatosaure (ilay Brontosaure @ bokim-pianarana) ? Toa zavatra ifotony izany. Aiza no niavian'ny safotofoto toy izao ? Ary taiza ny tena lohan'ilay biby tao anatin'izay fotoana izay ? Mazava loatra ny valin'izay fanontaniana izay fa niandry tao anatin'ny tahirin'ny Donia ilay izy, naharitra tao ambarapahitan'ny mpikaroka ny fahamarinana.
Efa tsy ao intsony ity pancarte ity fa nesorina. Angamba nahatsiaro ho oainy izy ireo :p . Dia gaga ianao !
Eto @'izay dia hanao parafrazin'ny filazan'ny Dr Lawrence Witmer, mpampianatra @ oniversiten'i Ohio sady spesialistan'ny dinôzôra, izay navoaka t@ National Geographic t@ martsa 2003, aho. Miala tsiny raha somary lavalava fa tsy maintsy azontsika tsara ny vontoatin'ny olana :
Akao sary an-tsaina ny rirakitso mivadika, misy ny voambolana "taolana" @ vodiny kitsoloha (miala tsiny @ lalaon-teny tsy nahy ). Ny taolana no santionany eo am-pelantanantsika, no porofo mivaingana. Antitra ilay izy, mety tapaka na mitresaka na tsy ahaizana amoahana hevitra mazava ilay izy. Kanefa farafaharatsiny azontsika tazomina eo am-pelatanantsika ilay izy.
Eo ambonin'izay dia misy ny taova malemy. Vitsy dia vitsy izy ireo, satria mazàna dia tsy voafôsily.
Eo ambonin'izay koa, alavitra dia alavitry ny porofo mivaingan'ny taolana dia misy ny fihetsika. Ny nofinofy dia ny mamantatra ny fihetsiky ny dinôzôra maro ary mampiditra azy ireo anatin'ny contexte, mba ahafantarana inona no nohaniny, aiza no natoriany, inona no natahorany, ary ahoana no nandehandehanany eran'ny tanety. Ary @ tampon'ity rirakitso mivadika ity, alavitra dia alavitry ny siansa, angamba misy an'i Casimir, ilay dinôzôra niara-nanjaka t@ Goldorak ny sarimiaina ho an'ny ankizy tany France t@ taona 80.
Izay anie no tiako iaviana e. Rehefa mividy DVD-n'ny tohi3n'i Jurassic Park eny amoron-dalana isika ka mijery azy dia ahitantsika manana fihetsika isan-karazany ny dinôzôra. Pahana ny T-Rex ary manana fandehan'akoho, fetsy ratsy ny Velociraptor, mitambatra ho andiany ny brachiosaures, mandrora poizina ny Dilophosaure, tahaky ny alika sy saka ny T-Rex sy ny Spinosaure, na dia ny ptérosaures aza manao tranom-borona, sns. Kanefa tsy mahafantatra an'izao mihitsy anie ny manam-pahaizana fa redaredan'ny sain'ny mpanoratra diam-penina ireo. Nefa dia mihanahana eo fotsiny ny vahoaka mijery an'izay, satria rehefa mandeha tele ilay izy dia tsy maintsy marina .
A-a-a, kôzy sérieux, ny sary sy ny tele no tena fitaovana tsara andrebirebena ny saim-bahoaka .
Kanefa moa raha ataontsika hoe misy Kristiana hanatontosa sarimihetsika misy dinôzôra sy olombelona miara-mivelona dia tsy maintsy any @ tribonaly no iafarany satria "manao tery vay manta ny finoany @ saim-bahoaka". Raha tsy izay no atao hoe mizàna tsindrin'ila dia inona ? Rehefa ny mpandala ny maha-olombelona mandà an'Andriamanitra no mamoaka boky sy sarimihetsika mandoka ny finoany (cf. "À la croisée des mondes" nosoratan'i Philip Pullman) na manaraby ny finoana kristiana dia dokafana koa izy, fa rehefa kristiana indray dia rebirebena ary enjehina !
Nilaza i Paul Hoffman @ lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe "Fowl Play" @ Discover t@ Mey 1992 hoe :
Izao no tena marina : na dia manan-jara mahita haràkan-dinôzôra 1 manontolo ny manam-pahaizana 1 dia tsy afaka manao an'izay tiany atao rehefa miverina manamboatra azy. Tsy maintsy mahafantatra ny toerana tena misy ny hozatra sy ny taolan-karepoka ary ny rohinofo mba ahafahany manao an'izay - kanefa nanjavona mandrakizay izy ireo. Petra-kevitra avokoa ny reconstructions rehetra.
Na dia rehefa manambatra taolana 2 ny manam-pahaizana 1, manana marge 3° izy rehefa mampiditra ny taolana 1 ao anatin'ny vavan'ny 1. Kanefa raha ovainy 1° fotsiny ny fipetraky ny taolana 1 dia efa miova tanteraka ny endrik'ilay harakan-dinôzôra amboarina.
Ohatra 1 ny tyrannosaure : misy manam-pahaizana milaza fa dinôzôra tsy afaka mihazakazaka izy satria raha nihazakazaka dia nitaky fo ngeza loatra ho an'ny tratrany. Torak'izay koa rehefa nandinika ny dia navelan'ny ati-doha t@ karan-dohan'ny dinôzôra ny manam-pahaizana dia nahita fa izy no nanana ny fanamboloana maranitra indrindra aorianan'ny voltora. Ka milaza izy ireo fa mpihinana fatim-biby (charognard) izy.
Torak'izay koa ny Apatosaure : misy ny milaza fa tsy afaka nitraka izy satria manjary torana, misy koa milaza fa afaka.
Kanefa tiako marihina fa raha ataontsika hoe lany taminga ny girafe, ary mahita ny haràkany ny manam-pahaizana 1 taon-jato maromaro aorianan'izay, tsy ho ampoiziny mihitsy fa mahavita mitanondrika misotro rano ny girafe fa ho ataony hoe mitaky fo lehibe loatra ho an'ny tratrany, satria tsy ho afaky ny mandinika ny firafitry mahatalanjon'ny fo sy ny lalan-dran'ny girafe izy.
5laody - 22/07/2013 12:23
misaotra ny mpanolotra lohahevitra nikaroka sy nizara,
Fa raha mijery ny haben-dry zalahy ireo aho, (tsy fantatro ny tena habetsaky ny karazana lehibe sy karazana dinozôro kely), mety ho efa lalànan'ny natiora ihany ny hahalany tamingana azy.
Ho nahita sakafo iainany isan'andro ve izy raha nitohy? raha manao fampitahana hoe ny elefanta iray mahalany bozaka amam-polo kilao maromaro isan'andro. Mety ho nahay niara-niaina sy nanana ny toerany ve ny olombelona sy ny dinôzoro?
Ny voay hono no karazan-dry zalahy tonga taty amin'ny androntsika izao, nefa tsy nandairan'ny fiovana be loatra, nahoana?
Ny mpanao sarimihetsika indray tsy omena tsiny fa mivarotra fialam-boly ka izay hampety ny tantara ihany no asehony.
Misy tompony angamba ilay sary faha efatra?
Nehemiah - 22/07/2013 16:33
5laody Fa raha mijery ny haben-dry zalahy ireo aho, (tsy fantatro ny tena habetsaky ny karazana lehibe sy karazana dinozôro kely), mety ho efa lalànan'ny natiora ihany ny hahalany tamingana azy.
Arakaraky ny tontolo iainana misy azy ihany.
5laody Ho nahita sakafo iainany isan'andro ve izy raha nitohy? raha manao fampitahana hoe ny elefanta iray mahalany bozaka amam-polo kilao maromaro isan'andro. Mety ho nahay niara-niaina sy nanana ny toerany ve ny olombelona sy ny dinôzoro?
Ho hitantsika @ fizaràna ho avy fa tontolo tsy sahaza azy ireo tokoa no tsy nahavitany miroborobo. Ho hitantsika koa fa tsy tokony malaky mamaly hoe "efa lany tamingana ny dinôzôra" isika.
5laody Ny voay hono no karazan-dry zalahy tonga taty amin'ny androntsika izao, nefa tsy nandairan'ny fiovana be loatra, nahoana?
Fanontaniana tsara mihitsy izao. Milaza ny fotopisainan'ny evôlisiona fa tao anatin'ny 65 000 000 taona dia nipoitra ny karazana musaraigne kely, izay nanjary primate, izay nanjary olombelona. Milaza koa ilay izy fa nisy asterôida nandona ny tany ka nitarika fiovan'ny toetr'andro nahatonga ny fahaverezan'ny dinôzôra, kanefa mbola eo ihany ny voay, nefa samy biby mangatsiaka ra.
Kanefa kosa tsaroako izao ny boky 1 izay milaza fa 6 000 taona lasa "monja" no namoronana ny biby mandeha ambony tany rehetra, ao anatin'izay koa ny dinôzôra...
5laody Ny mpanao sarimihetsika indray tsy omena tsiny fa mivarotra fialam-boly ka izay hampety ny tantara ihany no asehony.
Izay mihitsy no tokony tsaroan'ny mpijery, fa tsy mihanahana eo anoloan'ny tele eo fotsiny.
5laody Misy tompony angamba ilay sary faha efatra?
Tsy misy, raha tsy izay efa nasiany copyright.
Nehemiah - 23/07/2013 08:23